Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo : Tsy Nampihemotra Ireo Mpifidy Ny Fampitandremana Natao Tamin’ireo Mpanentana Ao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2011 12:56 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Fahalalahàna miteny, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora
Na dia eo aza ny fampitandremana avy amin'ny manam-pahefana amin'ny fanehoana fiangàrana amin'ny kandidà iray, ireo mpampiasa Twitter anefa dia haingana dia haingana amin'ny fandrisihana ny mpifidy, indrindra ireo tanora, mba handray anjara amin'ny fandatsaham-bato. Vokatr'izany, io fifidianana io dia nahitàna ny taham-pifidianana ambony dia ambony [ko] tsy mbola nisy toy izany, nahatratra 46 isan-jato ary i Park Won-soon, ilay kandidà demokratika izay matetika hàlan'ireo mpanankarena avy ao Korea atsimo, no nandresy.
Ankoatra ireo zavatra niantraika tamin'ilay fampielezan-kevitra, Twitter dia nandray anjara toerana lehibe indray teo amin'ny valim-pifidianana. Ny manam-pahefana Koreana Tatsimo dia nahita mihitsy ny herin'ny Twitter tamin'ny fiantombohan'ity taona ity (jereo ny ‘lahatsoratry ny Global Voices’ Korea Atsimo : Fifidianana mahazendana, satria nitarika ny olona handatsa-bato ny Twitter’. )
Niteraka resabe avy hatrany ilay fanapahan-kevitry ny Kaomisiona nasionaly misahana ny fifidianana hanjakazaka amin'ireo mpampiasa Twitter. Ilay Kaomisiona dia nanazava  [ko] fa hatramin'izay nanohanan'ireo mpampiasa matanjaka am-bava sy am-pahibemaso an'i Park, tamin'ny fandrisihana ny olona hifidy ny olona sahaza io toerana io dia sahala amin'ny manosika ny olona hifidy an'i Park raha ny marina. Ny fampielezan-kevitra anaty aterineto dia naneho  [ko] fa arakaraky ny fiakaran'ny tahan'ny mpifidy, no anakaikezan'i Park ny fandresena.
Toy ny hoe tsy manisy hasiny ilay fanapahan-kevitry ny kaomisiona nasionaly misahana ny fifidianana, maro amin'ireo olona malaza eo amin'ny sehatra politika no nanohy nandrisika hatrany ny olona handeha handatsa-bato tamin'ny fomba maro samy hafa. Kim Yeo-jin, mpilalao sarimihetsika mafana fo (@yohjini ), dia nandefa bitsika an-tsary iray  mampiseho azy manao fihetsika amin'ny tànany maneho ny fampanantenany hifidy.
Lee Oi-soo (@oisoo ), mpanoratra tantara malaza ary tafiditra ao amin'ireo mpandefa bitsika dimy voalohany be mpanaraka indrindra ao an-toerana, dia nandefa bitsika hoe [ko] :
Kim Jae-dong (@keumkangkyung ), mpanao hatsikana malaza ary mpampihomehy, dia nandefa bitsika hoe  [ko]:
Mpanao gazety iray ao aminà gazety mpandàla fiovàna (progresista) sy iray hafa avy amin'ireo mpandefa bitsika dimy voalohany be mpanaraka ao an-toerana, Huh Jae-hyun (@welovehani ), dia nanakiana [ko] ny tsy fiheveran’ ilay kaomisiona tamin'ny fametrahana teitery ho an'ireo mpampiasa Twitter :
Mpampiasa Twitter mahafatra-po iray, Doa (@doax ), no nanakiana [ko] ilay kaomisiona noho ny fandrindràna ny bitsika :
Tena devoly mihitsy ilay kaomisiona nasionaly misahana ny fifidianana . Maro ny olona mahatakatra ny lalàna satria ny olona tsy avela mandefa bitsika fandrisihana hifidy na dia amin'izao fotoana izao aza.[Naoty : ny fameperana ny bitsika fandrisihana hifidy dia nivoaka hanan-kery roa volana nialoha ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ary nanomboka tamin'ny fanombohan'ny fifidianana] Izany dia satria noraràn-dry zareo ny mpanohana an'i Park tsy handefa bitsika handrisihana ny olona hifidy. O rey olona a, afaka ny hifandrisika ny olona tsirairay avy mba handeha hifidy. Izany koa dia [hafahafa hoe manàna lalàna isan-karazany izy ireo ] ho an'ireo olo-malaza. Tsy mety amin'i Ahn Chul-soo  ny mandrisika ny mpifidy, raha toa i Kim Yuna  kosa afaka nanao izany tsy nisy teritery. [Naoty : Ahn dia mpandraharaha manan-kaja sy ambony izay nanorina ny orinasa iray mpanao “antivirus” ary profesora amin'izao fotoana izao , raha toa ka tompon-daka eran-tanin'ny fikorisàna amin'ny skate kosa i Kim].
Myung Seung-Kwon (@DrMyung ), fizisiana mpikambana sady mpahay siansa sangany ao amin'ny Foibem-Pirenena Miady amin'ny Homamiadana ao Seola, dia nandefa bitsika  [ko] niaraka tamin'ny fampihomehezana :
Han Hak-soo (@Mbcpdhan ), mpamokatra iray miaraka amin'ny MBC, tambajotranà fahitalavitra ao Korea Atsimo, dia nibitsika  [ko] sary fanamafisana ny hifidianany niaraka tamin'izao fanamarihany mihantsy izao : “indro ny sary fanamafisana ny hifidianako! Tsy te-handiso fanantenana ny zanakolahy aho izay mihevitra ahy ho olo-malaza. Noho izany ry kaomisiona nasionaly misahana ny fifidianana, miangavy, sazio aho !”
Tato aoriana i Lee Hyo-ri (@frog799 ), mpihira vehivavy avy ao Korea Atsimo ary olo-malaza iray manintona , dia nandefa bitsika  [ko] ny amin'ny fanekeny hifidy, Storyboardher (@storyboard7 ), mpampiasa Twitter iray, dia nanendrikendrika  [ko] azy ho lasa any amin'ny hery ankavia :
Lee Hyori (@frog799 ) namaly hoe  [ko] “Hmm. Inona no atao hoe avy amin'ny ankavia?”, nahatonga valinteny mampisalasala maro hafa mikasika io fanasokajiana io. Chun Dong-hwan (@jdhkyh ) nandefa bitsika hoe  [ko] :
Ny olona sasany naneho hevitra ampy fiheverana kokoa. Haksoo Bae (@way_Tao ) nilaza  [ko] fa ny mpampiasa Twitter be mpihaino toy izany no mandrisika ny olona hahay hisafidy ny olona ho fidiany:
Niezaka mafy hanao izay handehanana hifidy ny olona na dia tery dia tery aza ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Profesora ao amin'ny Anjerimanontolom-Panjakana ao Seoul i Cho Guk (@patriamea ), nampiditra  [ko] bitsika maro nanehoana fa tena matotra ny olona.
Bitsika iray  [ko] avy amin'ilay mpampiasa Twitter@urgood1109  no mivaky toy izao :
Niaraka tamin'izay, Oh Jin-ah (@dodani90 ) dia nandefa bitsika [ko] hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/11/07/24776/
 taham-pifidianana ambony dia ambony: http://www.yonhapnews.co.kr/issues/2011/10/26/1204480000AKR20111026222200001.HTML?template=2085
 Korea Atsimo : Fifidianana mahazendana, satria nitarika ny olona handatsa-bato ny Twitter’.: https://globalvoicesonline.org/2011/05/02/south-korea-surprising-election-as-twitter-draws-youth-to-polls/
 Ny fampielezan-kevitra anaty aterineto dia naneho: http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2011102601070323056002
 dia nandefa bitsika an-tsary iray: http://photo.media.daum.net/photogallery/politics/1026election/view.html?photoid=5588&newsid=20111026110021980&p=hani
 dia nandefa bitsika hoe : http://twitter.com/#!/oisoo/status/128951322371293184
 dia nandefa bitsika hoe: http://twitter.com/#!/keumkangkyung/status/128848037106810882
 dia nanakiana : http://twitter.com/#%21/welovehani/status/128784546891173889
 nandefa bitsika: https://twitter.com/drmyung/status/128996765708980226
 dia nibitsika: http://twitter.com/#%21/mbcpdhan/status/129005989889445888
 dia nandefa bitsika: http://yfrog.com/18jmuupj
 namaly hoe: http://twitter.com/#!/frog799/status/128738524848586752
 nandefa bitsika hoe: http://twitter.com/#%21/jdhkyh/status/128815670816284672
 nilaza : http://twitter.com/#%21/way_Tao/status/128734222549651456
 Bitsika iray: http://twitter.com/#%21/patriamea/status/128812865980338176
 dia nandefa bitsika : https://twitter.com/dodani90/status/129007746166173696